ပရီးမီးယားလိဂျ တနှဈတာ အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုရရှိဖို့ တဈပွေးနသေော ကစားသမား ၅ ဦး – Sports A2Z
ပရီးမီးယားလိဂျ တနှဈတာ အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုရရှိဖို့ တဈပွေးနသေော ကစားသမား ၅ ဦး
၂၀၂၀-၂၁ ပရီးမီးယားလိဂျဘောလုံးရာသီ ကနျ့လနျ့ကာ ပိတျဖို့ နီးကပျလာခြိနျမှာတော့ ဘောလုံးအသငျးဖနျတှနေဲ့ ကစားသမားတှအေတှကျ ရာသီကုနျမှာ တဈဦးခငျြးစှမျးဆောငျရညျကောငျးတဲ့ ဆုတှေ ဘယျသူတှရေရှိကွမလဲ စိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျလာစပေါတယျ။
ဒီဆုတှထေဲကမှ ဘောလုံးကစားသမားတှေ တနျဖိုးထား ပိုငျဆိုငျခငျြတဲ့ အင်ျဂလနျပရီးမီးယားလိဂျ၏ တနှဈတာ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆု PFA Player of the year ဆုလညျး ပါဝငျနပေါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ ဘောလုံးရာသီအတှကျ PFA Player of the year ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ကစားသမားကတော့ မနျခကျြစတာစီးတီးအသငျးမှ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျးနား ဖွဈပါတယျ။
ယခုနှဈ ပရီးမီးယားလိဂျ ဘောလုံးရာသီ ၂၀၂၀-၂၁ မှာ ရရှိဖို့ ရပေနျးစား တဈပွေးနတေဲ့ ကစားသမား ၅ ယောကျကတော့ ….
အီဂဈြသားက လီဗာပူးလျအတှကျ EPL ၄ ရာသီကစားထားရာမှာ ၃ ရာသီမွောကျ ဂိုး ၂၀ ပွညျ့အောငျသှငျးခဲ့တဲ့ရာသီဖွဈလာခဲ့တယျ။ ၂၀၂၁ ခုနှဈရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ တနှဈတာအကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကို ရရှိဖို့တော့ အနညျးငယျအားပြော့နတေယျလို့ ယူဆမှုရဲ့ဆနျ့ကငျြဘကျမှာတော့ မတညျငွိမျတဲ့အသငျးကို သူက တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ရုနျးကနျပွီး သှငျးဂိုးတှနေဲ့ ဆှဲတငျခဲ့တာဖွဈတယျ။
ဂိုးဖနျတီးမှု ၄ ကွိမျလညျးပွုလုပျထားသလို အပိုငျအခှငျ့အရေး ၁၀ ကွိမျအထိ ဖနျတီးထားတာက မာဆေးဆိုကျမှာ သူထမျးထားတဲ့ဝနျကို သကျသပွေနသေလို တာဝနျကမြှေုကိုလညျး ပွဌာနျးနတေယျ။ ၂၀၁၈-၁၉ ရဲ့ PFA ဆုရှငျက ဒီနှဈမှာ တကြော့ပွနျဆုရှငျဖွဈလာဖို့ အငွငျးပှားအနညျးငယျရှိနတောကိုလညျး တှရေ့တယျ။
ဒီရာသီဝကျက စပါးဈ၊ မျောရငျညို၊ ဆှနျနဲ့ ကိနျးတို့သိမျးပိုကျခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျလို့ ပွောစမှတျဖွဈခဲ့ရတယျ။ ၁၇ ဂိုးသှငျးပွီး ဂိုးဖနျတီးမှု ၁၀ ကွိမျရှိထားသလို အပိုငျအခှငျ့အရေး ၁၄ ကွိမျအထိ ဖနျတီးထားမှုက သူ့ရဲ့တညျငွိမျမှုကို အသိအမှတျပွုရမှာပါ။
ခနျြပီယံလိဂျဝငျဖို့ အလှမျးကှာသှားတဲ့ စပါးဈရဲ့ခွစှေမျးကွောငျ့ သူ​က ဒီဆုနဲ့ အထိုကျတနျဆုံးလို့ ပွောရခကျလာမှာဖွဈသလို ပှတျကာသီကာလှဲခြျောသှားဖို့လညျး ရှိနပေါတယျ။ လြှပျစီးလိုလငျြတဲ့ သူ့ရဲ့မွနျနှုနျးကွောငျ့ အခုထကျဂိုးရဖို့လညျး နောကျရာသီတှရေဲ့ရငျခုနျမှုတှမှော တှလေ့ာရဖှယျ ရှိနတေယျ။
၃။ ရူဘငျ ဒီယာ့ဈ
ဒီနှကေမှ ဘငျဖီကာကနေ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ လူသဈကစားသမားဟာ ခကျြခငျြးအထိုငျကပြွီး ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတှကေ ယိုပေါကျတှမြေားလှနျးတဲ့ မနျစီးတီးခံစဈကို အပွဈပွောစရာမရှိအောငျ အကဈြလဈဆုံး ခိုငျကညျြသှားစခေဲ့တယျ။
သူကစားခဲ့တဲ့ ၂၉ ပှဲမှာ မနျစီးတီးဟာ Clean Sheet ၁၄ ပှဲယူနိုငျတဲ့အထိ ထောငျတကျသှားခဲ့တာက ပျေါတူဂီသားကို အားဖွညျ့ခဲ့တဲ့ အပွာရောငျမနျခကျြစတာမွို့မှာ ပေးဂိုး ၁၆ ဂိုးသာ ရှိခဲ့တဲ့ အခွအေနကွေောငျ့ PFA ဆုက သူ့အတှကျသာဖွဈသငျ့တယျလို့ မှတျခကျြပွုခံထားရတယျ။
ဒီရာသီ စပါးဈရဲ့တိုကျစဈမှာ ၂၁ ဂိုးသှငျးယူထားတဲ့ကိနျးက အသငျးခေါငျးဆောငျပီသခဲ့ပွီး အသငျးရဲ့ သှငျးဂိုး ၃ ပုံ ၁ ပုံဝနျးကငျြအထိကို ထမျးတငျထားခဲ့တာဖွဈတယျ။ ၃၂ ပှဲကစားထားရာမှာ ဂိုးဖနျတီးမှု ၁၃ ကွိမျပွုလုပျထားခွငျးက မကျလောကျစရာ​​ခွစှေမျးမြိုးပါ။
ပရီးမီးယားလိဂျ ရှဖေိနပျဆုနဲ့ အတျောဆုံးဖွဈလာမယျ့ သူဟာ PFA ဆုရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုဖွဈစခေဲ့ပွီး လြော့ကနြတေဲ့ စပါးဈရဲ့ပုံရိပျမှာ တခုတညျးသောနဲ့ အထငျရှားဆုံးမြှျောလငျ့ခံထားရမှုလညျးဖွဈသလို သူက သူ့အလုပျသူလုပျနသေူအဖွဈ ပရီးမီးယားလိဂျ ရှဖေိနပျဆုကို ၃ ကွိမျမွောကျဆှတျခူးဖို့လညျး အနီးစပျဆုံးဖွဈနတောပါ။
၁။ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈ
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ တဦးခငျြးစှမျးဆောငျရညျအရ PFA ဆုနဲ့ အထိုကျတနျဆုံးခွစှေမျးကို ပွသထားသူကို ညှနျပွပါဆိုရငျတော့ ယူနိုကျတကျစဈသူကွီးဘရူနိုပဲ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ယူနိုကျတကျကှငျးလယျတိုကျစဈမှာ အနုပညာတရပျအဖွဈ ရှုမွငျခံထားရတယျ။
အခုရာသီမှာ ၁၆ ဂိုးအထိသှငျးယူထားတယျ။ ဂိုးအမြားဆုံးစာရငျးရဲ့ နံပါတျ ၃ နရောမှာ ဆှနျနဲ့ ပူးတှဲရပျတညျနတေယျ။ ဂိုးဖနျတီးမှုအမြားဆုံးစာရငျးမှာလညျး ၁၁ ကွိမျနဲ့ ဒုတိယနရောမှာ နရောယူထားတယျ။ ဂိုးပေါကျကို ၁၀၄ ကွိမျအထိ ကနျသှငျးထားပွီး အပိုငျအခှငျ့အရေး ၁၉ကွိမျအထိ ဖနျတီးပွထားသူပါ။
၂၀၂၀-၂၁ ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးရာသီ ကန့်လန့်ကာ ပိတ်ဖို့ နီးကပ်လာချိန်မှာတော့ ဘောလုံးအသင်းဖန်တွေနဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် ရာသီကုန်မှာ တစ်ဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ ဆုတွေ ဘယ်သူတွေရရှိကြမလဲ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာစေပါတယ်။
ဒီဆုတွေထဲကမှ ဘောလုံးကစားသမားတွေ တန်ဖိုးထား ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်၏ တနှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု PFA Player of the year ဆုလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ ဘောလုံးရာသီအတွက် PFA Player of the year ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ကစားသမားကတော့ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းမှ ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနား ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးရာသီ ၂၀၂၀-၂၁ မှာ ရရှိဖို့ ရေပန်းစား တစ်ပြေးနေတဲ့ ကစားသမား ၅ ယောက်ကတော့ ….
အီဂျစ်သားက လီဗာပူးလ်အတွက် EPL ၄ ရာသီကစားထားရာမှာ ၃ ရာသီမြောက် ဂိုး ၂၀ ပြည့်အောင်သွင်းခဲ့တဲ့ရာသီဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် တနှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ရရှိဖို့တော့ အနည်းငယ်အားပျော့နေတယ်လို့ ယူဆမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာတော့ မတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းကို သူက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရုန်းကန်ပြီး သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဆွဲတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဂိုးဖန်တီးမှု ၄ ကြိမ်လည်းပြုလုပ်ထားသလို အပိုင်အခွင့်အရေး ၁၀ ကြိမ်အထိ ဖန်တီးထားတာက မာဆေးဆိုက်မှာ သူထမ်းထားတဲ့ဝန်ကို သက်သေပြနေသလို တာဝန်ကျေမှုကိုလည်း ပြဌာန်းနေတယ်။ ၂၀၁၈-၁၉ ရဲ့ PFA ဆုရှင်က ဒီနှစ်မှာ တကျော့ပြန်ဆုရှင်ဖြစ်လာဖို့ အငြင်းပွားအနည်းငယ်ရှိနေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။
ဒီရာသီဝက်က စပါးစ်၊ မော်ရင်ညို၊ ဆွန်နဲ့ ကိန်းတို့သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်လို့ ပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ၁၇ ဂိုးသွင်းပြီး ဂိုးဖန်တီးမှု ၁၀ ကြိမ်ရှိထားသလို အပိုင်အခွင့်အရေး ၁၄ ကြိမ်အထိ ဖန်တီးထားမှုက သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရမှာပါ။
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ဖို့ အလှမ်းကွာသွားတဲ့ စပါးစ်ရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့် သူ​က ဒီဆုနဲ့ အထိုက်တန်ဆုံးလို့ ပြောရခက်လာမှာဖြစ်သလို ပွတ်ကာသီကာလွဲချော်သွားဖို့လည်း ရှိနေပါတယ်။ လျှပ်စီးလိုလျင်တဲ့ သူ့ရဲ့မြန်နှုန်းကြောင့် အခုထက်ဂိုးရဖို့လည်း နောက်ရာသီတွေရဲ့ရင်ခုန်မှုတွေမှာ တွေ့လာရဖွယ် ရှိနေတယ်။
၃။ ရူဘင် ဒီယာ့စ်
ဒီနွေကမှ ဘင်ဖီကာကနေ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ လူသစ်ကစားသမားဟာ ချက်ချင်းအထိုင်ကျပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေက ယိုပေါက်တွေများလွန်းတဲ့ မန်စီးတီးခံစစ်ကို အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် အကျစ်လစ်ဆုံး ခိုင်ကျည်သွားစေခဲ့တယ်။
သူကစားခဲ့တဲ့ ၂၉ ပွဲမှာ မန်စီးတီးဟာ Clean Sheet ၁၄ ပွဲယူနိုင်တဲ့အထိ ထောင်တက်သွားခဲ့တာက ပေါ်တူဂီသားကို အားဖြည့်ခဲ့တဲ့ အပြာရောင်မန်ချက်စတာမြို့မှာ ပေးဂိုး ၁၆ ဂိုးသာ ရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေကြောင့် PFA ဆုက သူ့အတွက်သာဖြစ်သင့်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုခံထားရတယ်။
ဒီရာသီ စပါးစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှာ ၂၁ ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့ကိန်းက အသင်းခေါင်းဆောင်ပီသခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့ သွင်းဂိုး ၃ ပုံ ၁ ပုံဝန်းကျင်အထိကို ထမ်းတင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၃၂ ပွဲကစားထားရာမှာ ဂိုးဖန်တီးမှု ၁၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ထားခြင်းက မက်လောက်စရာ​​ခြေစွမ်းမျိုးပါ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ရွှေဖိနပ်ဆုနဲ့ အတော်ဆုံးဖြစ်လာမယ့် သူဟာ PFA ဆုရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး လျော့ကျနေတဲ့ စပါးစ်ရဲ့ပုံရိပ်မှာ တခုတည်းသောနဲ့ အထင်ရှားဆုံးမျှော်လင့်ခံထားရမှုလည်းဖြစ်သလို သူက သူ့အလုပ်သူလုပ်နေသူအဖြစ် ပရီးမီးယားလိဂ် ရွှေဖိနပ်ဆုကို ၃ ကြိမ်မြောက်ဆွတ်ခူးဖို့လည်း အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နေတာပါ။
၁။ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ တဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်အရ PFA ဆုနဲ့ အထိုက်တန်ဆုံးခြေစွမ်းကို ပြသထားသူကို ညွှန်ပြပါဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက်စစ်သူကြီးဘရူနိုပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်တိုက်စစ်မှာ အနုပညာတရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ခံထားရတယ်။
အခုရာသီမှာ ၁၆ ဂိုးအထိသွင်းယူထားတယ်။ ဂိုးအများဆုံးစာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၃ နေရာမှာ ဆွန်နဲ့ ပူးတွဲရပ်တည်နေတယ်။ ဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံးစာရင်းမှာလည်း ၁၁ ကြိမ်နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာ နေရာယူထားတယ်။ ဂိုးပေါက်ကို ၁၀၄ ကြိမ်အထိ ကန်သွင်းထားပြီး အပိုင်အခွင့်အရေး ၁၉ကြိမ်အထိ ဖန်တီးပြထားသူပါ။
11 May နောကျဆုံးရ အာဆငျနယျသတငျးမြား စုစညျးမှု